ကွန်ကရစ် ဘောလုံးကွင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကွန်ကရစ် ဘောလုံးကွင်း
Posted by Khaing Khaing on Jun 12, 2012 in Creative Writing, Think Different | 27 comments
ရန်ကုန်မြို့ တော်တော်များ ရပ်ကွက်တွေ လမ်းမတွေကို ကွန်ကရစ်လမ်းတွေခင်း ပြီးသကာလ ….. စိတ်ညစ်စရာတွေက တစ်နည်းတစ်ဖုံထပ်ကြုံခဲ့ရပြန်ပါတယ် ……… လမ်းကြားတွေ လမ်းမပေါ်တွေ မှာ ကလေးမဟုတ် သူငယ်မဟုတ် အသက်ကြီးသူတွေက ဘောလုံးကန်နေကြတာလေးတွေပါ …… ညနေရုံးဆင်းချိန် လူသွားလူလာများချိန်တွေ ရာသီဥတုသာယာချိန်တွေဆို ဘောလုံးထွက်ကန်ကြတယ် အသက် ၁၆ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေ ကစားစရာနေရာမရှိလို့ လမ်းတွေပေါ်တက်ကန်တယ်ဆိုတာ မြင်ကောင်းသေးပါတယ် … အခုဟာက လူပျိုပေါက်တွေ အသက် ၃၀ နီးပါလူတွေ ကန်ရင်လည်း အားနဲ့မာန်နဲ့ လမ်းပဲသွားရမလား သူတို့ဘောလုံး ဂိုးအောင်ပဲ စောင့်ရမလား ထိုင်အားပေးရမလား …… စိတ်တွေက ဇဝေဇ၀ါဖြစ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် .. လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်သလို ကားတွေကိုလည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ် ဘောလုံးတွေက ကားအောက်တွေဝင် ကားသမားတွေက ဘောလုံးကန်သူများကြောင့် ရှိန်လျော့ရ ရပ်ရနဲ့ နောက်ပီကွန်ကရစ်လမ်းသစ်တွေခင်းနေစဉ် ပြီးတဲ့တဖက်ကို လမ်းကျောပိတ်ကာ တစ်ဖက်က ကားအသွားလုပ်ရင် ပိတ်ထားတဲ့ဘက်ခြမ်းမှာ အုပ်စုလိုက်ဘောလုံးကန်နေကြတာကို နေရာတော်တော်များများမှာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်
တစ်နေ့ကျွန်မရုံးပြန် မြို့ထဲလမ်း ၄၀ ၀န်းကျင်လောက်က လမ်းကျဉ်းကလေးမှာ လူလတ်ပိုင်းတွေ အုပ်စုလိုက်ဘောလုံးကန်နေကြတယ် …… ထိုနေရာကို ကျွန်မဖြတ်စဉ် ကျွန်မမျက်နှာ တည့်တည့်ကိုဘောလုံးလာမှန်တယ် ကျွန်မတော်တော်လေးကို ဒေါသလည်းထွက် ရှက်လည်းရှက်သွားမိတယ် သူတို့ကတော့ အေးဆေးပဲ ကျွန်မလည်း ပူထူပြီး ဘောလုံးကိုခြေနဲ့တအားကန်ပလိုက်တယ် ဒါမျိုးအဖြစ်က ကျွန်မမကြာခဏကြုံတွေ့နေရတယ် ကျွန်မက လူငယ်ပိုင်းမဟုတ်တော့တော်သေးတယ် အမျိုးသမီးငယ်တွေဆို အရမ်းကိုရှက်မယ့်အဖြစ်မျိုးဖြစ်သလို အိနြေ္ဒလည်းတော်တော်မဲ့ပါတယ် ……..
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် ကြာသပဒေးနေ့က ရွှေတိဂုံဘုရား တောင်ဘက်မုဒ်မှာရှိတဲ့ ဦးသန့်အုပ်ဂူနဲ့ အဖွားဒေါ်ခင်ကြည်ဂူဗိမာန်တွေရှိတဲ့နေရာရှေ့မှာ ဘောလုံးကန်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြန်တယ် ထိုနေရာက သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂုလ်တွေရဲ့ ဂူဗိမာန်နေရာတွေပါ တစ်ခြားနိုင်ငံသားတွေ မြင်ခဲ့ရင် ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ သရုပ်ပျက်ကစားတာတွေမပြုလုပ်သင့်ဘူးလို့ ကျွန်မမြင်မိတယ် …….
ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ အတူ ဖော်ပြပေးရောပေါ့ကွယ် ။ ရန်ကုန်မြို့ တော်မှာတင် မက ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတတ်ကြပါတယ် ကွယ် ။
ကပေရေ ဒ့ါပုံတွေကတော့ မတင်ရဲဘူးရှင့် …… ပြသနာတက်မှာစိုးလို့ပါ ……
ဘောလုံးလား သားသားတို့လည်းကန်တယ် အန်တီရဲ့
ဒါပေမဲ့ တဖက်သားကိုတော့ ထိခိုက်အောင်လုပ်ပါဘူး
အန်တီက လူကောင်သေးလို့ ထင်တယ်
ဟွန်းနော် …. သများကိုသေးသလေး ဘာလေးနဲ့ ငုံးဆူတာလူမသိတဲ့ ကိုနေပြောထားတာမှတ်မိ သေးလား …… တောင်မ
မခိုင်ရေ အဲ့လို အဖြစ်မျိုး ကြုံခဲ့ဖူးတယ် …. ။
တစ်ခါကဆို ဘောလုံးထိလို့ … ခြေထောက်တောင် အတော်နာသွားတယ် … ။ ဒေါသကလည်း ထွက် … ရှက်လည်း ရှက်ပေမယ့် …ထိတဲ့ ဘောလုံးကို ကောက်ပြီး ယူလာခဲ့တယ် …. ။ ဘောလုံးကန်တဲ့ လူတွေတင်မကပဲ .. လမ်းသွားလမ်းလာတွေပါ ညီမကို ကြောင်အမ်းအမ်းနဲ့ ကြည့်နေကြတယ် … ။ သူတို့ လိုက်လည်း မတောင်းရဲဘူး …. ။ ကိုယ်ကလည်း ပြန်မပေးဘူး …. အိမ်အထိယူလာပြီး .. တူလေးဆော့ဖို့ ပေးလိုက်တယ် … ဟိဟိ
လမ်းမှာမို့ ဘောလုံးထိတာ ကြားကောင်းသေးပေမယ့် …. ရုံးမှာနေရင်းဘောလုံးထိတဲ့ အဖြစ်ကတော့ တကယ့်ကို ခံပြင်းစရာကောင်းတယ် … ရုံးမှာ ဘရိတ်တိုင်းမ်ပေးတဲ့ အချိန် ဆယ့်ငါးမိနစ်မှာ ဘောလုံးထွက်ကန်တဲ့ လူတွေ ရှိလို့ … စက်ရုံဝင်းတွင်းမှာလမ်းလျှောက်တာတောင် ဘောလုံး လာမှန်ဖူးတယ် …မရှက်ပေမယ့် … ညစ်ပတ်ပြီးရွံ့ တွေပေနေတဲ့ ဘောလုံးထိတော့ …. ဒေါသကလည်း အရမ်းထွက် …ခြေထောက်လည်းအောင့်သွားလို့ … နာနေတဲ့ ခြေနဲ့ ပဲ တအားပစ်ကန်လိုက်တာ … မိအေးနှစ်ခါနာသွားတယ် … ။
အရင်ကတော့ ဘောလုံးကွင်းလိုနေရာမျိုး ၊ မြေကွက်လပ်လိုနေရာမျိုးတွေ ရှိတော့ …. ကလေးတွေရော ၊ လူကြီးတွေပါ ဘောလုံးကန်ချင်လျှင် ကန်လို့ ရတယ် … အခုတော့ကန်ထရိုက်တွေက မြေကွက်လပ်လေးများမြင်လျှင် …တိုက်တွေဆောက် ၊ ရှော့ပင်းစင်တာတွေ ဆောက်ဆိုတော့ … အိမ်ရှေ့လမ်းပေါ်ပဲ ထွက်ကစားကြတော့တာပေါ့ … ။ တချို့သော လမ်းများမှာ ရေးထားတယ် …. ဘောလုံးမကန်ရ ၊ လူအများအနှောက်ယှက်ဖြစ်မယ့် အပြုမူမျိုးမလုပ်ရ ၊ ဆိုက်ကား မ၀င်ရ ၊ ၀န်ရိုးဘီးတပ်ယာဉ်မ၀င်ရ စသဖြင့်ပေါ့လေ ….။ ကလေးတွေ လာကစားလျှင် မောင်းထုတ် အော်ထုတ်လို့ ရပေမယ့် … မကြီးမငယ်တွေပါ ၀င်ကစားနေတော့ … မောင်းထုတ်ရမှာလည်း မျက်နှာ နာစရာဖြစ်နေရော …… ။
(မခိုင်ရေ … ဘယ်သူမှ မသိအောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် အကြံပေးမယ်နော် …. သွားလေရာ သံမှိုအိတ်ဆောင်သွား …. ၊ ဘောလုံးကန်တဲ့ လမ်းကဖြတ်လျှင် အကယ်ဒမီမင်းသမီး ပန်းကြဲတဲ့ အမူရာနဲ့ .. သံမှိုကြဲခဲ့လိုက် … ဟိဟိ )
အမ်……….သွားကျပ်ပေးနေပြန်ပြီ ……….. ဟိုကတစ်ကယ်လုပ်မဲ့ပုံ …………..
ကိုဒေဗစ် မမတုံကကျပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး နည်းပေးတာ နည်းပေးတာ …..
ဟမလေး ဘောလုံးအကြောင်းတော့ ပြောပါနဲ့အေ..
နှစ်ခါရှိပီ ထိတာ..ရုံးရှေ့မှာကန်နေကြတာ တားလို့မရ ဘာလို့မရနဲ့လေ..
ရုံးကအပြန် ထွက်လိုက်တာနဲ့ ကန်မိတော့တာပဲ …
ပထမတစ်ခါ ရင်ဘတ်ကို ဘောလုံးနဲ့ကန်မိတာ ကြယ်တွေလတွေမြင်သွားတဲ့အထိပဲ ..
နောက်တစ်ခါလည်းအဲလိုပဲ … ခဏခဏ ထိတယ်…အဲလို အကျိုးပေးတာ..
ခုတော့ ဘောလုံးမြင်ရင် အဝေးကြီးက ရှောင်နေရတယ်.. စိတ်နာလွန်းလို့ ……
“ဟမလေး ဘောလုံးအကြောင်းတော့ ပြောပါနဲ့အေ..
မမဂျူရဲ့ အဆိုကို ကိုဒေးဗစ်က ထောက်ခံထားတယ် ……. မမဂျူရေ တစ်ခါတစ်လေ အဲဒီလူတွေ ကိုကလော်တော်ဆဲပလိုက်ချင်တယ် ……. အခုဘ၀လမ်းမပေါ်မှာ စည်းမရှိကမ်းမရှိ ဘောလုံး ကန်တဲ့ယောက်ျားတွေ နောက်ဘ၀မိန်းမဖြစ်ပါစေလို့လေ…………
“အခုဘ၀လမ်းမပေါ်မှာ စည်းမရှိကမ်းမရှိ ဘောလုံး ကန်တဲ့ယောက်ျားတွေ နောက်ဘ၀မိန်းမဖြစ်ပါစေလို့လေ…………”
ဟေ ဟေးးးးး ပျော်ထှာ….. လမ်းပေါ်ထွက်ဘောကန်ဦးမှ။ ဒါမှနောက်ဘဝမိန်းမဖြစ်မှာ။ နို့မို့ဆို အလုပ်အကိုင်တွေ ရှာခက်လွန်းလို့အေ…….
ကောင်းလိုက်တဲ့ မအိတုံအကြံ …… နောက်ဆိုအမကိုထိတဲ့ ဘောလုံးကို အိမ်ကိုယူလာမယ် အမသမီးလေးကစားဖို့ …… ဒါပေမယ့်သူတို့ကန်တဲ့ဘောလုံးတွေက မာမာကြီးတွေ ကောင်းလည်းမကောင်းဘူး ယူရမှာတော့ မတန်ဘူး ……. အိုင်တင်တွေကိုတော့ ကျင့်လိုက်ဦး မယ်အိမ်မှာ ဘာတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသမီးပန်းကြဲတဲ့ အမူအရာနော် …….. အိုခေ အိုခေ အသေမှတ်ထားမယ် …… ကိုယ့်လက်ကို သံမှုတွေ ဆူးမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမှဖြင့် …..
အီတုန်းရဲ့ ကွန့်မန့် ဖတ်ပြီး ရီ လိုက်ရတာ။
ဟုတ်တယ် ခိုင်ခိုင် ရေ
တကယ်တော့ တို့ ရန်ကုန်မှာ ကလေးအတွက်၊ ကစားစရာ နေရာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိ သလို၊ လူ ကြီးတွေ အတွက် လည်း မြို့ သစ်မှာ ခြံနဲ့ ၀န်းနဲ့ မဟုတ်ရင် တိုက်ခန်း နေ သူတွေ အတွက် သက်တောင့်သက်သာ လမ်း လျှောက် စရာ၊ နားနားနေနေ နေစရာ မရှိဘူးရယ်။ မြေ နေ ရာ ကျဉ်းပါတယ် ဆိုတဲ့ ဒီမှာ တော့ တိုက်တွေ ရဲ့ အောက်မှာ ကလေး ကစားကွင်းတွေ၊ ဥယျာဉ် လေးတွေ၊ ထိုင်စရာ ခုံလေးတွေ၊ လမ်းလျှောက်စရာ နေရာတွေ၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့ နေရာလေးတွေ၊ ဘောလုံး ကွင်း အသေး လေးတွေ၊ ကြက်တောင် ရိုက်တဲ့ ကွင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ညနေ ဘက်တွေ ဆိုရင် တော်တော် များ များ တိုက် အောက်တွေမှာ ဆင်းပြီး ထိုင်တဲ့ လူက ထိုင်၊ ပြေးတဲ့ လူကပြေး၊ အားကစားလုပ်တဲ့ လူက လုပ်နဲ့ ကိုယ် ၀ါသနာပါရာ လုပ်ကြတာပေါ့လေ။ ကိုယ့် နိုင် ငံမှာ အဲလို အိမ် ယာမျိုးတွေ ကို အများတတ်နိုင်တဲ့ ဈေးနဲ့ မလုပ်ပေးနိုင် မချင်းတော့ လမ်းပေါ် ဘော လုံး ကန်တဲ့ လူ တွေ ကြောင့် စိတ် အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရတာတွေ၊ မနက်စောစော လမ်း ထလျှောက် ရင်းကားတိုက် ခံရတာတွေ က ရှိနေ အုံးမှာ ပဲ။
မမိုချို ညီမတို့ဆီမှာတေ့ာ အဆင့်မြင့်အိမ်ယာတွေလုပ်ဖို့ တော်တော်လေးကို ကြိုးစားရဦးမယ် … စကားမစပ် ပြောရဦးမယ် ဟိုနေ့က ပြည်သူ့ဥယျာဉ်ကိုသွားတာ စမ်းချောင်းကလေးကို အသစ်လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့လေ သွားကြည့်မိပါတယ် အရင်ကရေတံခွန်ကကျတဲ့ရေမြောင်း တွေကို ပြောက်ကျားသလပတ်အပေါ်ကခင်းပီးရေပြန်ထည့်ထားတာကြီးဖြစ်နေတယ် တော်တော် စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာပြည် ကွာလတီကစားကွင်းတွေပါပဲ ………
ကိုယ်ကပဲသူတို့ကိုနှောင့်ယှက်နေသလို ကြည့်တာခံရပါတယ်။ ကြောက်တာနဲ့ မြန်မြန်လေးလျှောက်ပေးရပါတယ်။
လမ်းထဲမှာတော့ ညကြီးကျမှကန်ကြတာ ဘီယာဆိုင်က ကလေးတွေထင်ပါ့။
တိတ်ဆိတ်နေတော့ ဘောလုံးကန်တဲ့အသံ စကားပြောသံ အော်သံတွေဟာတော်တော်ဆူညံပါတယ်
အဲဒါ ကလေးတွေလို ဆော့ချင်တဲ့ လူလတ်ပိုင်းတွေပါအေ။
ညီမရွှေကြည်ရေ ……. အမလည်းတစ်ခါတစ်လေ ညီမလိုခံစားခဲ့ရပါတယ် ….. လမ်းလျှောက်မမြန်ရင်တောင်မှ သူတို့ကိုပဲ ကိုယ်ကပဲပေးသလိုအထင်ခံရသေးတယ် နောက်ကွယ်မှာလည်း ရေရွတ်သံတွေကကပ်ပါသေး ……..
လေးပေါက်ရေ ဆော့ချင်လည်းဆော့ပါ သူများကိုမထိခိုက်ရင်ကောင်းပါတယ် ………
Please don’t say asafootball players false. They are very pity as they cannot haveafree space to play.
Every group or township should have playground or football field.
The original plans of the Government have included these plans, they are not worse as well.
But later on these free spaces are sold by the unfair governers for their self wealth.
You can check it out in the “HTA WYUN BE'” group, North Okkalapa Township, if you don’t trust it.
At first these free spaces are intended to makeagrowing morning glory nor growing pigs, then they sold the places by themselves under giving the heading of for the development of the Governer’s office.
Finally, who made them rule-less playing !!!
မြန်မာ့ အားကစား ဂဘာကို လွှမ်းရမည်..
ပြောရရင် အဲဒါ မီလျံဘစ်ဇိနပ်ပဲဗျ..
ဒီနေ့ ကမ္ဘာကျော် ဘောသမားတွေကလည်း လမ်းပေါ်မှာ ဆော့ပြီး ဒေါ်လာ သန်းချီဝင်တဲ့ ပလေရာတွေဖြစ်.. မော်ဒယ်လေးတွေ၊ မယ်ဒေါ်ကြီးတွေရဲ့ အသည်းကျော် ဖြစ်လာကြတာ
မဆိုနိုင်ဘူး.. ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း အဲလို ဘောသမားတွေ နောက်ကျရင် ပေါ်လာနိုင်တယ်
ko mipukay ပြောသလို ဘောလုံးကန်ချင်သူတွေအတွက် ရပ်ကွက်တစ်ကွက်မှာ အားကစားကွင်း တစ်ခုတော့လုပ်ပေးသင့်ပါတယ် ….. ဒါမှလည်းမြို့တော်အင်္ဂါနဲ့ ညီညွှတ်မှာပေ့ါလေ ဗဟန်းမှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေက ပုလဲကွင်း ကျိုက္ကဆံကွင်းတို့လိုနေရာတွေမှာ ကန်လို့ရပါတယ် တစ်ချို့ကတော့ ကျိုက္ကဆံကွင်းနားက အိမ်ယာတွေရှေ့မှာညနေစောင်းဆို အမြဲတမ်းကန်နေတာလေးလည်းတွေ့ရပါတယ် …… ဗိုလ်စိန်မှန်ဘက်မှာဆို ဗိုလ်စိန်မှန်ကစား ကွင်းရှိတော့ ခြင်းခတ်သူတွေရော ဘောလုံးကန်သူတွေပါ အဲဒီမှာ ကန်ကြခတ်ကြပါတယ် ..
ကိုရွာစားကျော် ……… မြန်မာပြည်ကဘောလုံးသမားတွေရော နိုင်ငံခြားကဘောလုံးသမားတွေ ရော အခိုင်ကတော့ မကြိုက်ဘူး သူတို့ဘ၀ကိုသနားလို့ နံမည်ကြီးဘောလုံးသမားတွေဘ၀ဖြစ်ရင် ငွေရတာတော့ မှန်ပါတယ် ….. ကိုယ့်ကိုကိုယ့်မပိုင်တော့ပဲ ရောင်းကုန်တစ်ခုလိုဖြစ်နေသလားလို့ ထင်မိတယ် ….
မြန်မာ့အားကစားကမ္ဘာကိုလွှမ်းတာလေးကို စောင့်မျှော်မိပါကြောင်း ……. အမှန်ပြောရရင် တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံကဘောလုံးသွားကန်ရင် ကိုယ့်မြန်မာကိုနိုင်စေချင်တာအမှန် ပါ ဒါပေသည့် အားပေးရကြိုးမနပ်ခဲ့ပါဘူး ………
ဘော်လုံးကန်တာထက် ကားတွေနဲ.လမ်းသွား၊လမ်းလာတွေကို သူတို.ကိုယ်ပိုင်ဘော်လုံးကွင်းထဲ ဖြတ်လာတဲ. အကြည်.မျိုး ကြည်.တာတော. တော်တော်ခံရခက်တယ်။ စက်မှု.ဇုန်အပိုင်း(၆)လမ်း ( ပန်းလှိုင်အိမ်ယာဘေး) မှာ ညနေတိုင်းလိုလို ဘော်လုံးပွဲတွေ၊ ခြင်းဝိုင်းတွေ ရှိတတ်တယ်။ တခါတလေ ရပ်စောင်.ပေးနေရသေးတယ်။
ခိုင်ခိုင်ရေ အမတော့ ကျောင်းတက်တုန်းက တခါကြုံဖူးတယ်။
တရက် မြို့သစ်ဖက် ဆရာမအိမ်သွားတာ ဆိုင်ကယ်စီးရင်း လူကလည်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့။ အိမ်ရှာနေတာဆိုတော့ ဖြည်းဖြည်းလေး မောင်းတာပါ။
လမ်းသွယ်တခုလည်း ရောက်ရော ခြင်းဝိုင်းနဲ့ တိုးပါလေရော။ ကိုယ်လည်း ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေရာကနေ ရုတ်တရက် သူ့တို့ခြင်းလုံးက ကိုယ့်ဆီ တန်းတန်းမတ်မတ်ကြီး ၀င်တိုးပါလေရော။ ဘယ်ရမလဲ ခေါင်းလေးနဲ့ အသာလေး တိုက်လွှတ်လိုက်တာ ခြင်းလုံးက သူတို့ဆီ ပြန်ရောက်သွားပါလေရော။
အဲ့ဒါကို သူတို့က လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီး အော်ဟစ်အားပေးကြတာ။
ကိုယ်ကလည်း ဘာရယ်မဟုတ် အိမ်ရှာဖို့ စိတ်စောနေတော့ သတိမထားမိဘူး ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘာလုပ်လို့ လုပ်မိမှန်းမသိဘူး။ နောက်က သူငယ်ချင်းက ဟဲ့.. ဆိုတော့မှ သိတာ။
ညီမပြောတဲ့ လမ်းမတွေပေါ် ဦးသန့် တို့ ဒေါ်ခင်ကြည်တို့ နေရာတွေမှာကတော့ မသင့်တာ အမှန်ပါပဲ။ အမတို့ဆီမှာက လူတွေက မရှိတာထက် မသိတာ ခက်ဆိုသလို လူလတ်ပိုင်းတွေကပါ လုပ်ပြနေတာဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ညီမရယ်။ (သူကြီး ပြောသလို ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့ အစိုးရရထားခဲ့တာ ဆိုတာ ဟုတ်တယ် ထင်ပါရဲ့)
ဒဏ်ဆောင်ရတဲ့ ဥပဒေကို အသက်ဝင်အောင် လုပ်ပြီး စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ အပြုအမူတွေကို အရေးယူမှဒီလို အပြုအမူတွေ ပျောက်မယ်ထင်ပါတယ်။
တုံတုံ ရဲ့ အကြံအတိုင်းဘဲ နောက်တစ်ခါ ထိရင် အဲဒါကို မိအောင်ဖမ်းပြီး ယူသာထားလိုက်။
ပန်းကြဲ အကြံ ကတော့ ပုံမှန် သွားရင်းကြဲရင် သူများ မနင်းခင် အဲဒီ ပေါ်ကို ကိုယ်က အရင်နင်းမိမှာ။
ဒီတော့ နောက်ပြန် ပြန်လှမ်းပြီး ကြဲတာကို ကျင့်ထားပေါ့။
Ster နဲ့ မမပုရေ ……… ဘောလုံးကန်သူတွေ ခြင်းခတ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ချို့ရပ်ကွက်တွေက သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေက တင်းကြပ်ထားပေးပါတယ် ….. တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ အဲဒါမျိုးတွေမရှိပါဘူး …. ဗဟန်းဆရာစံရပ်ကွက်ကလမ်းကျဉ်းလမ်းကျယ်တွေမှာ အရင်က ဘောလုံးကန်သူတွေရှိပေမယ့် နောက်ပိုင်းရပ်ကွက်ကသက်ဆိုင်ရာတွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဘောလုံးကန်နေချိန်မှာ တားမြစ်ခဲ့တာကြောင့် အခုဆိုတော်တော်လေး နည်းပါးသွားခဲ့ပါတယ် ….
မပုရေ မထင်မှတ်ပဲ အကွက်လှလှလေးတွေကို လုပ်ပြသွားခဲ့တယ်နော် …… ညီမကလည်း ထပ်ဆင် လက်ခုပ်တီးအားပေးလိုက်ပါတယ် …….
အရီးလတ်ပြောတဲ့နည်းကိုလည်း ထပ်ဆင့်ပြန်ကျင့်ပါဦးမယ် အနောက်ကိုပစ်ဖို့နော် …..
ကွန်ကရစ် လမ်းတွေခင်းလိုက်တော့ လူငယ်တွေလူလတ်ပိုင်းတွေ အတွက်က တော့ပျော်စရာ ဘောလုံးကွင်း။ ခြင်းကွင်းဖြစ်တာပေါ့လေ။ Rose တို့လို လမ်းသွားလမ်းလာ အတွက်သာ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရတာပါ။ ဆော့ချင် ပျော်ချင်နေတဲ့ သူတွေ အတွက်ကတော့နေရာ အကျယ်ကြီးပေါ့လေ။ Rose ရဲ့ အတွေ့ အကြုံ ရတော့ ကောင်ကလေးတွေ ဘောလုံးကန်နေကြတာ ဂိုးအသွင်းကောင်းလို့လေ ကိုယ့် ပေါင်ကို ဘော်လုံးထိသွားတယ်။ ဂိုးပြီဟေ့ ဂိုးပြီဟေ့လို့ လဲအော်တယ်။ စကပ်အဖြူဝတ်ထားတာ နဲ့ တော့ ဟုတ်နေတာပဲ ရွံတွေ ဘောလုံးရာလို အကွက်လိုက်ကြီး ပြီးတော့ လှလှပပသွားမယ့် အချိန်၊ စိတ်နာလိုက်တာ။ ဒေါသတွေက ထွက်လိုက်တာ ပူထူ ရှက်လဲ ရှက်ပြီး။ လာထိတဲ့ ဘောလုံး ကို ကောက်ကိုင်လိုက်ပြီး၊ နေရာတကျထားပြီး စောင့်ဖိပြီးနင်းချပြစ်လိုက်တယ် ကော်ဘော်လုံးဆိုတော့ ပျားချပ်ပြီး ကွဲထွက်သွားတယ်။ ကန်လိုက်တဲ့ ကောင်လေးတွေလည်း တောင်းပန်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။ သူတို့ ဘော်လုံးကို ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ အတွက် စိတ်တိုသွားပုံရတယ်။ တမင်လုပ်တာလား မှန်းမသိပေမယ့် သူတို့ ကိုရန်မတွေ့ ပဲ ဘော်လုံးကို လုပ်ပြီး နောက်တောင် လှည့်မကြည့်ပဲထွက်လာခဲ့တယ် ဒေါသအပြည့်နဲ့ပေါ့လေ။ နောက်ကနေပြောသံကြားတာက ဘော်လုံးမို့လို့တော်သေးတယ်တဲ့။ လူသာဆို အရိုးကွဲမလားမသိဘူးတဲ့။ ဒေါသကလည်း မိုးပေါ်မှာပဲတဲ့ ပြောပြီးကျန်ခဲ့ ကြတယ်။
ဒေါ်ရိုးကြီး …… ဘောလုံးကဒေါ်ရိုးကိုလည်းထိရော ဂိုးသွင်းကောင်းတယ်လို့ အော်ရောဟုတ်လား ….ခစ်ခစ်ခစ်
တော်သေးတာပေ့ါ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ဘောလုံးကိုဖိနှောင့်နဲ့ဖိတာ ဘောလုံးကကွဲသွားလို့ မကွဲပဲ ခြေချော်သွားရင် ပိုအရှက်ကွဲအုံးမှာ ……. ဟုတ်ပါတယ် ဘယ်မိန်းကလေးမဆို ကိုယ့်ကိုဘောလုံး လာထိရင်တော့ မခံနိုင်ပါဘူး …….. အရင်ကကျွန်မအိမ်ကလမ်းကျဉ်းလေးမှာနေပါတယ် ညနေ ဘောလုံးကန်ချိန်ဆို အိမ်တံခါးပိတ်ထားရတယ် မပိတ်ရင် ဘောလုံးတွေက ဘုရားစင်တွေ တီဗီတွေရှေ့မှာ နေရာယူနေကြလို့ပါ …….